Pouilly-en-Auxois, Bourgogne-Franche-Comté, i-France
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Marie Noelle
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Marie Noelle izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Sanibonani nonke futhi siyakwamukela ku-Pouilly-en-Auxois!
Manje usungafika uthole i-Maisonette kaGogo kanye ne-charm yayo isikhathi eside njengoba ufuna, futhi isikhathi eside njengoba ufuna ...
Indlela elula ukubhukha MANJE!
Ngenxa yokuzimisela nomsebenzi wawo wonke umndeni, manje ungadla, uphumule futhi uphumule kulesi sifunda esihle saseBurgundy.
Thola lapha ukuthi kungani ....
Lokhu kwakhiwa kwendlu yezisebenzi zamathayela endala elungiswe ngesitayela "sefekthri" izokwamukela egumbini layo lokuphumula elikhulu elivulekela ekhishini. Izindonga zayo zamatshe ezindala zizokuhlebela izinganekwane nezinsumansumane zeMorvan ne-Auxois.
Kufakwe ku-mezzanine ofinyelela kuyo ngezitebhisi ezi-spiral, ikamelo lokulala elithandekayo, elikhulu ngokwanele, lizokulethela ukuphumula nokuzola. Yakhiwe ngombhede ophindwe kabili kunosayizi kanye nomatilasi ababili abantofontofo ababekwe phansi.
Indlu yokugezela izokunikeza ishawa ebanzi.
Ungasebenzisa ngokugcwele ikhishi kanye ne-hob yalo ukuze ujabulise abangani bakho kanye / noma umndeni wakho kulesi sikhala esinobungane. Ukuze ujabulele wonke umuntu, i-microwave kanye nesiqandisi esincane onakho.
Ibungazwe ngu-Marie Noelle
UMarie Noelle Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Pouilly-en-Auxois namaphethelo